सैनामैना राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई
Radio times. बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००
रुपन्देहीको सैनामैना १० पानबारीमा सैनामैना नगरपालिकाको आयोजनामा संचालित राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि समापन गरिएको छ ।
एक हप्ता सम्म संचालित प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालय स्तरिय खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सैनामैना राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि पशुपति माध्यमिक विद्यालयले जित्न सफल भएको छ ।
दोस्रो संस्करणको खेल सप्ताहमा पशुपति माध्यमिक विद्यालयले ९ स्वर्ण पदक प्राप्त गरी प्रथम भएको हो । यस्तै सालझण्डी मावि ४ स्वर्णसहित द्वितीय भएको छ भने ३ स्वर्ण पदक जित्दै सुनगाभा पब्लिक मावि तृतीय हुन सफल भएको छ ।
‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने नारासहित बिहीबार देखि प्रतियोगिता सुरु भएको थियो ।
यस्तै भलिबल खेलमा ६ देखी १० कक्षासम्मका छात्रा तर्फ हिमाल बोर्डिङ्ग स्कुल प्रथम, सालझण्डी मा.बि. द्धितिय र ग्यालेक्सी ईलिश बो स्कुल तृतिय भएका छन् ।
त्यसतै भलिबल मै कक्षा ६ देखी १० सम्म छात्र तर्फको खेलमा सालझण्डी मा.बि प्रथम, जनकल्यण मा.बि. द्धितिय, र पर्रोहा मा.बि तृतिय भएका छन् ।
कक्षा ११ र १२ को भलिबल खेलामा छात्रा तर्फ पशुपति मा.बि प्रथम, रामापुर मा.बि. द्धितिय र तृतिय पर्रोहा मा.बि भएका छन । ११ र १२ कै भलिबल छात्र तर्फको खेलमा प्रथम पशुपति मा.बि , द्धितिय रामापुर मा.बि. तृतिय सुनगाभा पब्लिक स्कुल भएका छन् ।
क्रिकेट खेलमा जनकल्याण मा.बि.प्रथम, पर्रोहा मा.बि द्धितिय भएका छन् । फुटवल खेलमा प्रथम पशुपति मा.बि, द्धितिय रामापुर मा.बि. तृतिय प्रभात आवासीय मा.बि भएका छन ।
त्यसतै खेलको पुर्व सन्ध्यामा गरीएको मार्चपासमा कोटियादेबी मा.बि प्रथम, सैनामैना मा.बि.द्धितिय र लिटिल बर्डस बो.स्कुल तृतिय हुन सफल भएका छन् ।
खेल सप्ताहको समापनमा सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सैनामैनालाई हरेक क्षेत्रमा देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका स्थापना गर्ने अभियानमा योजनाबद्ध रुपमा लागेको बताउनु भयो ।
नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य भुमिलाल सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति फणिन्द्र प्रसाद शर्मा, सैनामैना उपप्रमुख बिना राना, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, वडा नं १० का वडाध्यक्ष लोक नारायण थापा, नेकपाका सैनामैना इञ्चार्ज खुसीराम चौधरी, शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज अर्याल लगायतले बोल्दै सैनामैनामा खेलकुदको प्रशस्त सम्भावना रहेको र खेल सप्ताहले विद्यार्थीहरुको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न टेवा पुर्याउने बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००
सैनामैनाका ६ जना दृष्टिबिहिन युवाहरु आत्मानिर्भर बन्दै बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००
नेपाली काँग्रेस सैनामैना नगर सभापति पदमा नारायण खनालको उम्मेद्वारी घोषणा बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००
हरितालिका तीज र यसको मौलिकता बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००
सैनामैनामा रेग्मीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गठन बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ००:५८:००